ओहो ! कत्रो भ्यागुता,मान्छे भन्दा अग्लो, रहस्य थापा पाए आफै तिनछक्क - Gaule Media ::
Home/रोचक/ओहो ! कत्रो भ्यागुता,मान्छे भन्दा अग्लो, रहस्य थापा पाए आफै तिनछक्क
ओहो ! कत्रो भ्यागुता,मान्छे भन्दा अग्लो, रहस्य थापा पाए आफै तिनछक्क
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०६:३७
एजेन्सी ।फेसबुकमा अहिले एउटा भ्यागुताको फोटो भाइरल भएको छ । नामको फेसबुक पेजमा एकदमै ठूलो साईजको भ्यागुताको पोष्ट गरिएको छ ।
फेसबुकमा पोष्ट हुने बित्तिकै ३ लाख बढिले यो फोटोलाई शेयर गरिएको छ । सबैले कसरी एउटा भ्यागुता कसरी यत्ति ठूलो भयो भनेर छक्क परेका थिए । फेसबुकमा यो भ्यागुता ६ केजीको भएको र मानिस जतिकै लामो भएको बताइएको थियो ।
तर टेक्सासका एक प्रोफेसरले त्यो फोटोको बास्तविकता खुलासा गरेका छन् । प्रोफेसर डेविड स्टीनका अनुसार खासमा त्यो भ्यागुता बुलफ्रग प्रजातिको हो । यो भ्यागुता ६ इञ्च लामो पाइएको थियो । यो बढिमा एक केजीको थियो ।
तर यो भ्यागुतालाई क्यामेराको एंगल मिलाएर यति लामो खिचिएको हो । यो फोटो इडिट भने नगरिएको स्विकार गरिएको छ । यो फोटोमा यति मजाले क्यामराको एंगल मिलाइएको छ की त्यो भ्यागुता मानिस जत्तिकै अग्लो देखिन्छ ।